रुघा खोकी बाट ग्रसित हुनुन्छ ? लाग्नै नदिने कसरी? उपचार कसरी गर्ने? -महत्पुर्ण जानकारी !!! | सुदुरपश्चिम खबर
जिभ्रो र अक्युप्रेसर च्यापुमा लगेर जिभ्रोको टुप्पो केही सेकेन्डका लागि थिचिरहनुस् । त्यसपछि बिस्तारै जिभ्रोलाई सहज बनाउनुस् । फेरि फेरि त्यही अभ्यास गरिरहनुस् ।यही बेलामा चोरी औंला र माझी औंलाले निधारमा आँखीभौंको बीच भागमा एक सेकेन्डका लागि थिच्नुस् अनि रोकिनुस् । फेरि फेरि यो क्रिया दोहो–याउनुस् ।यी दुवै अभ्यास एकैचोटि गर्नुस् । पच्चीस सेकेन्डसम्म यो क्रिया दोहो–याइरहनुभयो भने बन्द नाक खुल्छ । सास रोक्नुस् गहिरो सास लिनुस् । त्यसपछि टाउको पछिल्तिर झुकाउनुस् र चोरी औंला र बुढी औंलाले थिच्नुस् । सम्भव भएसम्म यसरी नाक थुनेर उभिनुस् । साह्रै गाह्रो भएपछि मात्र औंला हटाउनुस् ।यो प्रक्रिया नाक नखुलुन्जेलसम्म दोहो–याउनुस् । राति सुत्नुअघि यी अभ्यास गर्नुभयो भने आनन्दपूर्वक सुत्न सक्नुहुन्छ अनि रातभरिमा ठीक पनि हुनुहुन्छ ।
१०. रुघा लाग्दा बेस्सरी सीँसीँ गरेर सिंगान फ्याक्ने, नाक कोट्याइरहने, नाकभित्र औंला छिराउने र बढी सिंगान पुछिरहने नगर्नुस् । ११. तोरीको तेलमा ५÷७ केस्रा लसुन काटेर फुराउने र कालो पार्ने, सेलाएपछि उक्त तेल (लसुन होइन) नाकमा ५।६ थोपा दिनको तीन, चार पटक हाल्ने एवम् छाती, ढाड, निधार र घाँटीमा पनि दल्ने गर्नुस् । बच्चाहरूलाई रुघा लाग्नासाथ यही प्रक्रिया अपनाउनुस्, तुरुन्तै फाइदा हुनेछ ।
–दीर्घ रूपमा रुघा तथा पिनासबाट पीडित भएका कलिला बालबालिकाको पढाइलेखाइ नै प्रभावित हुन्छ । –रुघा लागेमा बालबालिकाको मन एकाग्र हँदैन, पढेको विषय याद पनि रहँदैन । –यस्ता बालबालिकाको उचित उपचार आवश्यक हुन्छ । आधुनिक मेडिकल विज्ञानमा रुघाको कुनै औषधि छैन ।
–रुघा लागेको बेलामा ६, ७ दिन कठिनपूर्ण हुन्छ । –रुघा लागेमा मानिस डिस्पेन्सरीमा गएर एन्टिकोल्ड तथा एन्टिबायोटिक खान्छन् । –एन्टिबायोटिकले रुघाका भाइरसलाई कुनै असर गर्दैन ।
–रुघाको लक्षण देखिनासाथ तातो पानी सेवन गर्ने । –बिहान बेलुकी मनतातो पानीमा खुट्टा डुबाएर ५, १० मिनेट राख्ने । –सुत्ने बेलामा पैतलामा तोरीको तेलले मालिस गर्ने ।
–अदुवाको रस आधा चम्चा, तुलसी पत्रको रस आधा चम्चा र एक चम्मा महसँग मिसाएर दिनको तीन पटक सेवन गर्ने । –अदुवा र बेसार हालेर पकाएको पानीले बिहान, दिउँसो र बेलुकी दिनको तीन पटक कुल्ला गर्ने । –एक हातको बूढीऔंलाले अर्को हातका सबै औंलाको टुप्पोलाई दसपटक पालैपालो अँठ्याउने छोड्ने गरेर अक्युप्रेसर उपचार गर्ने ।
–दुवै आँखा बन्द गर्ने र नाकद्वारा तीन पटक लामो र गहिरो सास लिने र मुखबाट बिस्तारै बाहिर फ्याक्ने । –गहन आरामको अनुभव गर्ने । कल्पना गर्ने कि वरिपरिको वातावरण शान्त, मनोरम र घमाइलो छ । सूर्यको चम्किलो किरणले न्यानो महसुस भएको छ ।
–बैगुन, गाँजर, लौका, फर्सी, आलु, दही, अचार, चिसो, अमिलो तथा गुलियोे पदार्थहरू सेवन नगर्ने । –चिसो, धुवाँ र धुलोबाट बच्ने । –तातोपानी प्रयोग गर्ने ।
–नुहाउनु परेमा तोरी वा तिलको तेलले सम्पूर्ण शरीर मालिस गर्ने र मनतातो पानीले नुहाउने । –सफा, सुकिलो र जाडोमा न्यानो कपडा लगाउने ।
–रुघाबाट बच्न रुघा लागेका व्यक्तिको नजिक वा मुखामुख हुने गरी बस्नु हुँदैन । –बस्नै परे मुख र नाक छोप्ने मास्क लगाउनु ठीक हुन्छ ।
–रुघा संक्रमित व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सरसामान र लुगा प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
–अमला, कागतीजस्ता भिटामिन सी भएका र मौसमी फलफूलको प्रयोगले शरीरमा भिटामिन सीको आपूर्ति हुनसक्छ ।
–भिटामिन सीले शरीरको रोगसँग लड्ने शक्ति बढाउँछ ।दिनहुँ वा हप्ताको एकपटक जलनेती क्रिया गर्ने तथा दिनहुँ पाँच मिनेट अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्ने हो भने रुघाखोकी लाग्ने, पिनास पर्ने, आँखा दुख्ने तथा कमजोर हुने, टाउको भारी हुने आदि समस्या नै आउँदैन ।
भिटामिन–सी भएका फलफूलहरू रुघा र खोकीको लागि जरुरत पर्दछ । सबैभन्दा धेरै मात्रामा भिटामिन–सी ‘कागती’मा पाइन्छ । यसले तपाईँको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई मजबुत बनाउन मद्दत गर्दछ । दिनहुँ कागतीको जुस र मनतातो पानी पिउनाले निर्जलीकरण हुनबाट बचाउनुको साथै प्रतिरक्षा प्रणालीलाई पनि बलियो गराउँदछ । सुन्तला पनि भिटामिन–सीको राम्रो श्रोत हो। यसको जुस र मनतातो पानी पिउनाले खोकीबाट समेत राहत प्रदान गर्दछ । स्ट्रबेरीमा पनि प्रशस्तै भिटामिन–सी पाइन्छ । रुघाखोकी सँग लडाइँ गर्ने हो भने विभिन्न प्रकारका भिटामिन–सी युक्त फलफूल सेवन गर्नु राम्रो उपाय हुन्छ । किनभने यिनीहरूमा पाइने फाइबरले पेटलाई भरि बनाउनुको साथै प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउने सेतो रक्तकोषलाई समेत मद्दत गर्दछ । भिटामिन–सी भएको फलफूल चिन्ने तरिका सजिलो छ । जुन फलफूलको स्वादमा हलुका अमिलोपना मिस्सिएको हुन्छ, त्यसमा भिटामिन–सी पाइन्छ भनेर बुझ्नुपर्दछ । जस्तै; भुइँकटहर, आरु, अङ्गुर, लिची, चेरी, अनार, हलुका काँचो स्याउ, अमला, नासपति आदि ।
जुन फलफूलमा बढि गुलियो अनि चिल्लोपना हुन्छ, त्यस्तो फलफूलले रुघा र खोकीको लागि राहतको सट्टा समस्या थप्ने काम गर्दछ । जस्तै; केरा, गाँजर, नरीवल, मेवा, गुलीयो अनि बढि पाकेको स्याउ, अम्बा, बँगेर, आदि । रुघाखोकी लागेको बेला यस्ता फलफूलले स्वासप्रश्वासमा बाधा पुर्याउँदछ ।यसलगायत रुघाखोकी लागेको बेलामा दूग्धपदार्थहरू पनि खानुहुँदैन । जस्तै; दूध, चिज, दही, कुल्फी, आइसक्रिम, मही, आदि । सकेसम्म गुलियो खानेकुराहरूलाई टाढा राख्दा नै रुघाखोकी सँग लड्न सहज हुने गर्दछ ।
श्री बनारसीधाम ज्योतिेर्लिङ्ग मन्दिर - फोटो फिचर !!
यी दुइ राशि बीच प्रेम र विवाह कहिल्यै सफल हुदैन !!